Nin 200 mas qaniinyadooda u badheedhay si uu dawo aadamaha badbaadisa u helo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Nin 200 mas qaniinyadooda u badheedhay si uu dawo aadamaha badbaadisa u...
Nin 200 mas qaniinyadooda u badheedhay si uu dawo aadamaha badbaadisa u helo
Shantii daqiiqo ba meel dunida ka mid ah ayaa qof ugu dhintaa qaniinyo mas, afar kalena way ku laxaad beelaan.
Laakiin waxa jira dad naftooda ku tijaabiya xamaaratadaa halista badan.
Tim Friede oo ku nool gobolka Wisconsin ee Maraykanka, ayaa muuqaallo iska duuba isaga oo si badheeda isugu dhigaya qaniinyada masas sun badan oo ku baahiya muuqaaladaa YouTube. Muuqaalada uu duubay midkood ayaa muujinaya isaga oo laba goor uu qaniinyo ku dhuftay maska halista ah ee black mamba oo isaga oo dhiig gacanta ka dareerayo hadana kamarada ku soo jeeda oo hadlaya
Qaniinyada black mamba waa xanuun. Waxay u dhigantaa kun shinni ah oo mar qudha kugu wada dhuftay. Shinnada qaneeniyadeeda waxa la socda hal ama laba milligiraam oo waabay ah, laakiin qaniinyada mamba waxa la socota 300 ilaa 500 miligiraam” ayuu BBC-da ku yidhi.
Dabadeed maxaa dhacay. “isla markiiba gacantaa barartay. Tusaale ahaan dhawrkii maalmood ee ka dambeeyey waan jiifay. Sidii gacantu ii barartay markaan eego. Waxaan qiyaasi karaa waabayda masku igu tufay xaddigeeda. Aad bay u xanuun kululayd.” Ayuu yidhi.
Waxa dadka noocaas ahi sameeyaan ma garan karno. Arintani waa fal halis ah oo bilaa akhlaaq ah. Wax wada shaqayn ahi nama dhex mari karto” ayuu yidhi Dr Stuart Ainsowrth oo ka tirsan kulliyada Tropical Medicine ee jaamacadda Liverpool.
Kulliyadda uu ka tirsanyahay waxay ka mid tahay kuwa ku foogan sidii loo heli lahaa dawo waabayda masaska dunida oo dhan lagu dawayn karo. Sida caadiga ah tallaalka cusub ee la helo waxa lagu tijaabiyaa jiir lagu hayo shay baadhada iyo xawayaano, ka dib marka la ogaado in aanay halis ahayn oo dadka wax tar u leeyihiin ayaa dad kooban oo goobo caafimaad oo casri ah jooga hadana lagu tijaabiyaa.
“Dadka qaar baa iyagu isku tijaabiya waabayda, laakiin falalkaasi waa halis oo waa loo dhiman karaa. Waxaana haboon in aan dadku sidaa yeelin” ayuu yidhi Dr Ainsworth.
Laakiin marka la eego shirkadaha dunida ee sameeya dawooyinka, waxa muuqata in aanay jirin qawaaniin qeexan oo u yaal cilmi baadhista dawooyinka waabayda.
“Ma jiraan xeerar wax soo saar, bad qab amaba tayada dawada” oo dunidu ka midaysan tahay, sida uu sheego ururka fadhigiisu yahay Ingiriiska ee Wellcome Trust oo ka mid ah ururada u xusul duubaya in la helo talaal cusub oo cilmiyeysan oo dunida loo helo.
Khatar loo dhiman karo
Friede si adag buu u beeniyaa eedda ah in uu naftiisa halis u gelinayo sidii uu u soo jiidan lahaa dad badan oo ka daawada YouTube-ka.
“Waxan aan samaynayo uma sameeyo uun YouTube ha laga daawado. Waxan doonayaa in aan dad ku badbaadiyo. Sababta keli ah een YouTube u adeegsadaa waxay ahayd inaan helo dhakhaatiirta haatan ila shaqaysa. Halis weyn baan u badheedhay waanan ku guulaystay,” ayuu yidhi.
Qiyaastii 3,000 oo nooc oo masas ah 200 oo keliya ayaa waabaydoodu halis tahay oo dadka dishaa ama naafaysaa. Friede qaar badan oo ka mid ah kuwaa halista ah ayaabu isku biimeeyey.
Ha noqdeen Cobraha, Vipers ama Mamba e wuxu isku tijaabiyey oo qaniinan in ka badan 200 oo mas labaatankii sano ee la soo dhaafay. Waxa intaa dheer 700 goor iyo dheeraad uu isku muday waabay qudhiisu.
Waabayda masku qofka ku sii daayo marba xadigeedu waa gaar, mararka qaarko masku inta uu qofka qaniino ayaanu waabay ku sii dayn, mararka qaarna waabay badan ayuu ku sii daayaa.
“Hadii aanad adkaysi buuxa u lahayn waabayda masaska qaarkood sida black mamba, waxay wax yeeshaa habdhiska neefsiga, taas oo ka dhigan in muruqyada sambabada ka shaqaysiiyaa fadhiistaan oo aad neefsan kari weydo, indhaa ku xidhmaya oo ma socon karaysid. Laakiin ma gaadho maskaxda oo qofku ilaa inta uu dhimanayo wax wuu kala garanayaa” ayuu yidhi Friede.
Waxaan haystaa Cobra Afrika laga keenay. Qaniinyadiisu waa halis. Aad bay u xanuun kululayd.”
Cobra-ha Afrika waabaydiisa waxa ku jira Neurotoxin oo unugyada dareemeyaasha disha.
“Cobraha noocyadooda kale waabaydooda waxa ku jira maadada Cytotoxin xubnaha jidhka naafaysa, sida gacan ama far.”
Friede wuxu ku shaqeeyaa aragtida ah in xaddi waabay ah oo yar jidhka qofka ay gasho si taasi u suurto geliso si uu jidhku u samaysto hab dhis difaac oo uu kaga hortago waabaydaa marka dambe laakiin aragtidiisaa aad baa loo dhaleeceeyey
Previous articleDawladda Ethiopia Oo Ganafka Ku Dhufatay Damaca Masar ee Biya Niilka
Next articleDaawo Intii Xukuumadani Jirtay qoysas badan ayaa dalka iskaga tagay, siyaasi ramaax